Chii chinonzi API, REST, SOAP, XML, JSON, WSDL uye Dzimwe Dudziro
Paunoshandisa bhurawuza, bhurawuza rako rinokumbira kubva kune vatengi server uye sevha inotumira kumashure mafaera ayo bhurawuza rako rinoungana uye rinoratidza peji rewebhu naro. Asi ko kana iwe uchingoda kuti server yako kana peji rewebhu kuti utaure kune imwe server? Izvi zvinoda kuti iwe urongedze kodhi kune API.
Chii chinodaro API miririra?
API chidimbu che Kunyorera Chirongwa Chekushandisa. An API seti yemaitiro, maprotocol, uye maturusi ekuvaka web-inogoneswa uye nhare-based zvinoshandiswa. Iyo API inotsanangura maitiro aunogona kuratidza (sarudzo), kukumbira uye kugamuchira dhata kubva ku API Server.
Chii chiri API?
Kana ichishandiswa mumamiriro ekuvandudza webhu, an API inowanzo seti yakatsanangurwa yeiyo Hypertext Transfer Protocol (HTTP) meseji yekukumbira, pamwe nedudziro yechimiro chemameseji ekupindura. Webhu APIs inobvumidza iko kusanganisa kwakawanda masevhisi muzvishandiso zvitsva zvinozivikanwa semashups.Wikipedia
Tsanangudzo yeVhidhiyo yeZvinoitwa nemaAPIs
Pane maviri makuru maprotocol kana uchigadzira API. Yakarongeka mitauro mitauro senge Microsoft .NET uye Java vagadziri vanowanzo sarudza SOAP asi inonyanya kufarirwa protocol ndeye REST. Zvakawanda sekunyora kwako kero mubrowser kuti uwane mhinduro, kodhi yako inopfuudza chikumbiro kune API - Chaizvoizvo nzira pane sevha inosimbisa uye kupindura nenzira kwayo ne data rawakumbira. Mhinduro dzeSAPO pindura neXML, inotaridzika kunge HTML - kodhi inoshandiswa nebrowser yako.
Kana iwe uchida kuyedza APIs pasina kunyora tambo yekodhi, DHC ine yakanaka Chrome Kushanda yekudyidzana nemaAPI uye nekuona mhinduro dzavo.
Chii chinomiririrwa neAcronym SDK?
SDK chirevo che Software Yekuvandudza Kit.
Kana kambani ikaburitsa yavo API, pane zvinowanzo kuperekedzwa zvinyorwa zvinoratidza kuti iyo API inovimbisa, kuti ingabvunzwa sei, uye ndedzipi mhinduro dzakakodzera. Kubatsira vanogadzira kutanga musoro, makambani anowanzo kushambadzira Software Yekuvandudza Kit kuisa kirasi kana mabasa anodikanwa nyore nyore muzvirongwa izvo musimudziri ari kunyora.
Chii chinonzi Acronym XML inomiririra?
XML chirevo che eXtensible Markup Mutauro. XML mutauro unoshandiswa kumisikidza dhata mune fomati inoverengwa nevanhu uye inoverengwa nemuchina.
Heino muenzaniso wekuti XML inoonekwa sei:
<?xml shanduro ="1.0"?>
Chii chinomiririrwa neAcronym JSON?
Heino muenzaniso wedata iri pamusoro uchishandisa JSON:
"zita": "Chigadzirwa A",
"tsananguro": "Chigadzirwa chekutanga",
"pa": "mumwe nemumwe"
Chii chinomiririrwa neAcronym REST?
REST ndicho chirevo cheiyo Mumiririri weNyika Kutamisirwa dhizaini yekuvaka yekuparadzira hypermedia masisitimu. Saka yakatumidzwa naRoy Thomas Fielding
Wee… mweya wakadzika! Unogona kuverenga iyo yose chinyorwa pano, inonzi iyo Architectural Styles uye Dhizaini yeNetiweki-yakavakirwa Software Maumbirwo akaendeswa mukugutsikana kusingagumi kwezvinodiwa padanho raDOCTOR WEFILOSOPHI muRuzivo neComputer Sayenzi na Roy Thomas Fielding.
Kutenda Dr. Fielding! Verenga zvimwe nezve REST kuWikipedia.
Chii chinonzi Acronym SOAP inomiririra?
SOAP chirevo che Chakareruka Chinhu Chinosvika Protocol
Ini handisi mugadziri, asi mumaonero angu vagadziri vanoda SOAP vanozviita nekuti vanogona nyore kugadzira kodhi mune yakajairwa programming interface iyo inoverenga iyo Webhu Tsanangudzo Mutauro Mutauro (WSDL) faira. Ivo havadi kuongororodza mhinduro, zvatove kuitwa kuburikidza neWSDL. (~ # ~) Sipoap (~ # ~) inoda envelopu yehurongwa, iyo inotsanangura mameseji mameseji uye maitiro ekuigadzirisa, seti yemitemo yekukodha yekuratidzira zviitiko zvekushandisa-zvakatsanangurwa madhatabhesi uye musangano wekumiririra maitiro ekufona nemhinduro.
Amplero: Nzira Yakapusa Yekuderedza Mutengi Churn
Feb 9, 2017 at 2:35 PM
Ndatenda netsananguro huru idzi.
Izvi zvakanaka ndatenda changamire neruzivo urwu.
Zvita 6, 2017 na1:13 PM
Ndinokutendai nekutumira ruzivo urwu - ndakashamisika kuti REST inorevei kwenguva yakareba! 🙂
Zvita 13, 2020 na6:44 PM
Pakupedzisira (pekupedzisira!) pfupiso pfupi yezvinoreva zvese izvi zvaimbotyisa-zvinonzwika acronyms. Ndinokutendai nekushandisa mutauro wakajeka uye wakananga, mhedzisiro = ramangwana rinotaridzika kupenya zvishoma kune uyu mudzidzi.
Zvita 14, 2020 na3:40 PM
Hi Vic, hongu… ndinobvuma. Mashoko acho anotyisa. Ndinorangarira nguva yekutanga yandakaronga chikumbiro kune API uye zvese zvakadzvanya uye handina kukwanisa kutenda kuti zvaive nyore sei. Ndatenda!